Hevitra MPANOHARIANA | Andavanandro | 24
Nodimandry tampoka i Zafihita (Rafilomena)
2007-09-29 @ 08:08 in Andavanandro
Araka ny tatitra nataon'ireo mpiray hatsikana sy mpiara-miasa aminy ao amin'ny kidaona maraina androany Sabotsy dia nodimandry halina ny namany mpanao hatsikana fantatry ny mpanaraka ao amin'ny TVM antsoin'ny maro amin'ny hoe Zafihita ary rehefa manao sarimbavy dia Rafilomena kosa. Banga iray indray izany ny ao amin'ny tontolon'ny hatsikana.
Tao amin'ny fandaharana tsikitsiky kely isan-kariva antsoina hoe torak'hehy no nahalalana azy voalohany teo amin'ny fiakarana sehatra. Iray amin'ireo mpanao hatsikana ao amin'ny fou hehy ( na foy hehy) izy no sady nanentana mihitsy. Nisy manko ny fotoana somary nahakivy ireo mpiray tarika aminy fa tahaka ny tsy tian'ny olona ny zavatra avoakan'izy telo mirahalahy. Izy no tsy sasatra mihitsy nitarika azy mirahalahy.
Ankoatra ny mahampanao hatsika azy dia miaramila no asa nolazaina ka mety ho marina tokoa aloha izany. Mpikabary ihany koa ny tenany na ankafaliana izany na ankartsiana. Efa nisy ihany ny niteny tamin'ny alarobia fa maty ny lehilahy saingy voahitsy ihany izany fa mbola nankany amin'ny dokotera izy. Kanjo moa dia lasa tokoa izy ity.
Ny mpanoratra dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ary mampahery azy ireo manoloana izao te-javatra azo lazaina hoe tampoka ihany izao. Iangaviana izay te-hamangy mba ho any Ambohitrimanjaka avy hatrany fa tsy hakany amin'ny morgue intsony. Raha misy moa ny filazana hafa mila lazaina dia hotaterina eto ihany.
Feno Kamiao miaramila mivezivezy Antananarivo
2007-09-14 @ 16:42 in Andavanandro
Tamin’ny gazety iray no nahitako fa voasava avokoa ny ankamaroan’ny fiara tany Toamasina tany. Natao hitandroana ny fahalemana izany no sady hitsinjovana fandrao misy mitondra zavatra mampiahiahy tampoka any ho any. Tsy mandray ny fanapahan-kevitra toy izany ny tompon’andraikitra raha tsy mahare siosio na vaovao nampitain’ny mpitsikilo, ho isika izay.
Teto Antananarivo indray dia nahagaga ihany fa be ny fiaraben’ny mpitandro ny filaminana no nandalo taty amin’ny faritra atsinanan’Antananarivo, avy any atsimo tany. Na zandary na miaramila (ny polisy no tsy tsikaritro loatra) dia feno azy avokoa. Misy ny nitsitapitapy fa nisy ihany koa ny nitandahatra mihitsy.
Raha nojerena indray ny fitafin’ireo tao anatiny dia tsy ilay tena fitafy mianjaika alohan’ny matso no hitako sady tsy nisy nanao fonontanana rahateo izy rehetra. Raha tsy misy moa rahampitso ny filazana noho ny anton’izao fihetsiketsehana tsipalotry ny maso izao dia andeha atao hoe nanao fanazarantena ry zareo. Fa raha tsy izany kosa, fa inona loatra ary no mitranga any ambadimbadika any?
CUA: Rava trano ny Palestiniana!
2007-07-27 @ 15:53 in Andavanandro
Amin’izao fotoana fikarakarana fatratra ny lalaon’ny nosy fahafito hotanterahina eto Antananarivo izao dia manomana aok'izany (nahitsy) ny toerana manamorona ny kianja sy ny trano itoeran’ny mpilalao ny Kaominina. Mifanindran-dalana amin'izany dia misy koa ny fandravana sy fanesorana izay rehetra heverina ho manaratsy endrika ny tanàna.
Raha jerena maika amin’izao dia tahaka ny misosa tsara avokoa ny arabe mety ho fandehanan’ireo vahiny ireo. Saingy raha misy ny mianatranatry ny mandeha taxibe ka mandray azy na mandalo eo amin’ny fiantsonana manoloana ny fakana lasantsy Total ampitan’ny tranoben’ny Fiaro eo Ampefiloha dia hahatsapa tsara ny kintaontaona (lavaka ngeza be mangotatana) amin’io fiantsonana somary mihataka amin’ny arabe mahafinaritra io. Tahaka ny porofo manameloka fa te-ho tsara eo anatrehan’ny vahiny mpifanila sisintany amintsika isika saingy ny tena fahatsapan’ny mponina mandalo kosa dia hahare hatrany ny haratsin’ny lalana tsy raharahan’ny Kaominina. Na izany aza tsy manamaivana ny asa be dia be vitany amin’izao fotoana izao.
Fa fony mbola ampikarakarana ny dobo filomanosana hanaovana ny fifaninanana aho ka mitopy manodidina ny fakana sary dia ho hita akaiky eo ireo trano ratsy endrika tsy ara-dalàna manamorona ny lakandranon’Andriatany (ilay mifanila amin’ny lalamby no tiako lazaina). Dia lasa ny saiko tamin’izany hoe dia ho hitan’ny rehetra izany ireo trano ratsy endrika ireo. Kanjo dia rava trano ny Palestiniana androany maraina vao mifoha.
Ity fitondrana tia sehoseho tia tokoa ve dia hanaiky mora ho afa-baraka amin’ireo trano ireo ? Palestianiana moa no nilazako azy satria na dia mihalehibe aza ny trano vita sady amin’ny biriky sy mitafo fanitso dia tsy tompon’ny tany sy ny trano ry zareo ka tsy menatra ny Kaominina nitondra ny Bulldozer hanjera izay rehetra mijoro. Palestiniana satria na dia efa ampolo taona aza no nipetrahana miafinafina (tsy mitomandavana manaraka ny arabe tsinona fa manaraka ny rano) teny dia tsy mananjo hitaky zavatra loatra eo anatrehan’ny mahery. Saingy manantena ry zareo fa hatramin’ny fiafaran’ny lalaon’ny nosy ihany no tsy mahazo miserantserana eny fa raha vao lasa kosa ireo vahiny maro ireo dia iverenana indray no toerana. Isika Malagasy zatra vonjy tavanandro manko tsy hahafehy mandrakizay ny olona tsy hanangana ny trano indray avy eo. Toy ny tsenan’Isotry ihany e !
«Mialoha 1 2 3 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Manaraka»